JpDaily आज कहाँ-कहाँ बाढीको सम्भावना ?(सूचीसहित)
आज कहाँ-कहाँ बाढीको सम्भावना ?(सूचीसहित)
जयपृथ्वी डेली बिहीबार, असार ३, २०७८, ११:२५:००
काठमाण्डाैं : लगातारको वर्षाका कारण देशका धेरै नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ । मनसुन सक्रिय नै रहेकाले आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा आज पनि ठूला तथा साना नदी, खोलामा बाढीको सम्भावना रहेको विज्ञले बताएका छन् ।
विज्ञले आज कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकालीलगायत केही नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै, कन्काई, कमला, वाग्मती र यसका सहायक नदीमा पनि पानीको सतह घटबढ हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
पश्चिम राप्ती, तिनाउ, बबईका स–साना नदीमा पनि पानीको बहाव बढ्ने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञले आग्रह गरेका छन् ।
यी क्षेत्रमा आज बाढीको जोखिम
आज वाग्मती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, काठमाण्डौ, चितवन र मकवानपुरका नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा पनि आज बाढी आउने सम्भावना छ । विज्ञका अनुसार त्यहाँको कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजार, बझाङ र दार्चुला र आसपासका जिल्ला भएर बहने साना नदीमा पनि पानीको बहाव बढी आउने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८, ११:२५:००